Taliban oo dowlad Islaami ah ka dhiseysa Aghanistan xilli ay Mareykanka ka baxayaan. | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Taliban oo dowlad Islaami ah ka dhiseysa Aghanistan xilli ay Mareykanka ka...
Taliban oo dowlad Islaami ah ka dhiseysa Aghanistan xilli ay Mareykanka ka baxayaan.
Kabul:-Taliban ayaa Mareykanka uga digtay inaysan ka bixin heshiiska ay ciidamada Mareykanka iyo NATO uga baxayaan Afghanistan kahor 1-da bisha May, ayada oo wacad ku martay falcelin ay ka mid yihiin weeraro culus haddii ay sidaas dhacdo.
Biden ayaa Arbacadii u sheegay taleefishinka ABC “inay waqtiga la qabtay ee 1-da May ay dhici karto, balse ay adag tyahay,” isaga oo intaas ku daray in haddii waqti laga sii dheereeyo 1-da May uusan noqon doonin mid badan.
“Waa inay baxaan,” waxaa sidaas weriyayaasha u sheegay Suhail Shaheen oo ka mid wada-xaajoodayaasha Taliban isaga oo ku sugan Moscow, halkaasi oo ay wada-hadallo uga socdaan Taliban iyo dowladda Afghanistan. Shaheen ayaa ka digay in sii joogistan1-da May kadib ay jebieneyso heshiiska.